Sir La helay: Macalinka xulka Ingiriiska Roy Hodgson shaxdiisa uu kaga hortagi doono xulka Russia oo la ogaaday. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Sir La helay: Macalinka xulka Ingiriiska Roy Hodgson shaxdiisa uu kaga hortagi doono xulka Russia oo la ogaaday.
Sir La helay: Macalinka xulka Ingiriiska Roy Hodgson shaxdiisa uu kaga hortagi doono xulka Russia oo la ogaaday.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 11:57 AM Waxaa lasoo bandhigay shaxda uu tababare Roy Hodgson adeegsan doono kulanka ugu horeeyo oo ay xulka England wajihi doonaan xulka Russia tartanka Euro 2016.
Macalin Hodgson shaxdiisa qarsoodida ah ayaa la helay waxaana la ogaaday inuu cayaari doono nidaamka ah 4-3-3 weliba si lama filaan ah shaxdiisa waxaa kasoo muuqan doonaan xidigaha kala ah Raheem Sterling iyo Adam Lallana.
Shaxda macalin Hodgson adeegsan doono kulanka Russia ee sida sirta ah loo helay ayaa ka muuqato in Jamie Vardy uusan kusoo bilaaban dooni sidoo kalena kabtan Wayne Rooney isagana khadka dhexe ayuu ka hawl gali doonaa taasi oo ka dhigan in Harry Kane kaligiis weerarka ka cayaari doono.
Xulka England axada nagu soo fool leh kulankooda Euro 2016 ugu horeeyo waxay magaalada Marseille kula cayaari doonaan xulka Russia.
Macalin Hodgson shaxadiisa haatan sida xatooyada ah lagu helay qaabkan ayay u qorsheeyay:
Daafaca: Smalling, Cahill, Rose iyo Walker
Khadka dhexe: Dier, Ali iyo Rooney
Weerarka: Lallana, Sterling iyo Kane